Arsenal Oo Barbaro Niyadjab Leh La Kulantay Mar Kale, David Luiz & Sokratis Oo Guul Ka Qasaariyay & VAR Oo Muran Dhalisay | Tvsomalilandeurope });
Arsenal Oo Barbaro Niyadjab Leh La Kulantay Mar Kale, David Luiz & Sokratis Oo Guul Ka Qasaariyay & VAR Oo Muran Dhalisay
Waxaa Qoray Idiris Maxamed Dabshid
Posted on September 15, 2019 by tvsomalilandeurope.net in Uncategorized // 0 Comments
WATFORD, ENGLAND - SEPTEMBER 15: Pierre-Emerick Aubameyang of Arsenal (14) scores his team's first goal past Ben Foster of Watford during the Premier League match between Watford FC and Arsenal FC at Vicarage Road on September 15, 2019 in Watford, United Kingdom. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
Arsenal ayaan wax guul ah gaarin kulankii seddexaad ee isku xiga iyagoo markii labaad barbaro la kulmay ka dib markii ay 2-2 ku kala baxeen kooxda Watford oo marti loogu ahaa Vicarage Road.
Gunners ayaa labo gool oo ay ka hormartay laga keenay ka dib qaladaad daafac oo ay sameeyeen, halka VAR eedeyn loo jeedinayo madaama ay ogolaadeen goolkii koowaad ee Watford oo muran laga keenay saxnaanshihiisa.
Tababare Unai Emery ayaa markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan ku soo bilaabay Mesut Ozil, iyadoo markii ugu horeysay ay garoonka isla soo wada galeen Dani Ceballos iyo xididga Jarmalka taasoo farxad gelisay jamaahiirta Gunners.
Wax badan kuma aysan qaadanin in Arsenal ay la wareegto hogaanka ciyaarta iyagoo shabaqa soo taabtay daqiiqadii 21aad. Ceballos ayaa kubad bartamaha garoonka ka qaatay Hughes, waxaa kubada helay Kolasinac kaasoo isna kubada u sii dhigay Aubameyang oo boos qaatay kaasoo durbadiiba shabaqa ruxay.
Watford ayaa ku dacwatootay in Ceballos uu qalad ku galay Hughes markii uu kubada ka qaadanayay laakiin VAR oo eegtay ayaa go’aamisay inuusan wax qalad ah dhicin.
Arsenal ayaana hogaanka dheereysatay daqiiqadii 32aad iyagoo dib inoo soo xusuusiyay kooxdii Arsenal ee kubad isku dhiibka lagu yaqaanay.
20 baas ayay Arsenal sameysay ka hor inta uusan Aubameyang dhalinin goolkiisii labaad ee ciyaarta.
Ozil ayaa baaskii 17aad waxa uu kubada u dhigay Maitland-Niles kaasoo isna u karoosay xiddiga reer Gabon oo shabaqa dhex dhigay.
Haddii goolkii labaad ee Arsenal uu ina soo xusuusiyay kooxdii Gunners ee kubad isku dhiibka ku caanka aheyd, hadana daqiiqadii 54aad ee qeybtii labaad waxay iska dhigeen kooxda Arsenal ee waqtiyadii ugu danbeysay iyagoo qalad kale oo daafac oo ay sameeyeen lagu ciqaabay.
Goolhaye Leno ayaa baas gaaban oo halis ah u dhigay Sokratis kaasoo isku dayay inuu u sii dhiibo Geundouzi oo taagnaa afka hore ee xerada ganaaxa laakiin waxa kubada dhexda ku taabtay Deulofeu iyadoo ay lugta u gashay Tom Cleverley oo shabaqa ku taabtay, taasoo ciyaarta ka dhigtay 2-1.
Arsenal waxay beryahaan noqotay koox marka ay weerarkeeda kugu cajib geliso kugu niyadjabisay qaladkeeda daafac. Tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ciyaartoyda Arsenal waxay sameeyeen 14 qalad oo gool looga dhaliyay waana in ka badan labo qalad inta ay koox kale sameysay isla waqtigaas.
Sidoo kale waxaa muran laga keenay in la ogolaaday goolka Cleverley inkastoo sharciyada cusub ee kubada cagta aysan aheyn kuwa cad, hadana sharciga ayaa dhigaya in marka koox ay kubada soo bilaabeyso in ciyaaryahan kooxda kale uusan soo dhex geli karin xerada ganaaxa, waxaana sida sawirka hoose ka muuqata Deloufeu hal lug ugu jirtaa xerada ganaaxa, ka hor inta uusan Leno kubada u baasin Sokratis, VAR laguma eegin go’aankaan.
Daqiiqadii 79aad ayaa Arsenal rigoore laga dhigay, waxaana mar kale rigoorada galay David Luiz kaasoo qalad ku galay Pereyra. Waxaa rigoorada u soo istaagay isla Pereyra kaasoo dhan qaldan u diray Leno islamarkaana gool u sarifay rigoorada taasoo hal mar isla ruxday garoonka Vicarage Road markii ay ciyaarta noqotay barbaro 2-2 ah.
Tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore Arsenal ayaa ah kooxda ugu badan ee rigoore laga dhaliyay horyaalka Premier League, waxaa laga dhaliyay 10 rigoore, iyadoo xilli ciyaareedkan kaliya seddex rigoore laga dhaliyay.
Ciyaarta waxa ay ku soo dhamaatay barbaro 2-2 ah iyadoo Arsenal ay guul iska qasaarisay mar kale sababo la xiriira daafac xumadooda, halka sidoo kale laga doodi doono goolkii Cleverley iyo doorka muuqaal caawiyaha VAR.
Gunners shan kulan oo ay ciyaarta waxa ay ku jirtaa kaalinta 7aad iyagoo leh sideed dhibcood.